ဘိုင်ဒန်က ရောမမြို့၌ ဥရောပခေါင်းဆောင်များနှင့် အီရန်ကိစ္စဆွေးနွေးရန်ရှိ - Xinhua News Agency
အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့တွင် ကျင်းပမည့် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ အီရန်နျူကလီးယားအရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်(Joe Biden )သည် ဥရောပခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးသွားရန်ရှိကြောင်း အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Jake Sullivan က အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် ပြောခဲ့သည်။ဘိုင်ဒန်သည် ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန် ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ပြီး JCPOA သို့ ပြန်သွားရန် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြန်လည်စတင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်ရှိ ရပ်တည်နေသည့် အနေအထားအပေါ် အခြေခံကာ တွေ့ဆုံရန် Sullivan က သတင်းထောက်များအား ရောမသို့အသွား Airforce One လေယာဉ်ပေါ်တွင် ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ဟု အများက သိကြသည့် ပူးတွဲ ဘက်စုံဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ကို ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးမှုသည် ပူးတွဲညှိနှိုင်းရေး အနေအထားတွင် ညှိနှိုင်းရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု နှင့် အီရန်၏ နျူကလီးယား အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အီရန်အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာမကုန်မီ နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်အတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြန်လည်စတင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် နျူကလီးယားညှိနှိုင်းရေးမှူး Ali Bagheri Kani က အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အမေရိကန်နှင့် အီရန်အရာရှိများသည် ဗီယင်နာတွင် တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ ကြားခံနည်းဖြင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ယခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ခြောက်ကြိမ်တိုင်တိုင် ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ၎င်းတို့၏ သဘောထားကွဲလွဲမှုများမှာ သိသာထင်ရှားစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်ကာ အီရန်အစိုးရအပြောင်းအလဲကြောင့်လည်း ဆွေးနွေးပွဲများရပ်တန့်ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
အီရန်ကို ဖိအားပေးရန်အတွက် မကြာသေးမီက ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့ သည် အမြဲတမ်းတံခါးပိတ်ထားသည့် JCPOA သို့ ပြန်သွားရေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးတံခါးဖွင့်ရန် ထပ်ခါတစ်လဲလဲ ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ အကယ်၍ သံတမန်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်း၍ မရပါက အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နည်းလမ်းဖြင့် လှည့်သွားရမည်ဟူ၍လည်း သတိပေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အီရန် က ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလကတည်းက သဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာ ၎င်း၏ကတိကဝတ်များ အကောင်အထည်ဖော်မှုများကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Oct. 28 (Xinhua) — U.S. President Joe Biden will discuss the Iran nuclear issue with European leaders on Saturday on the sidelines of the G20 (Group of 20) summit in Rome, Italy, National Security Advisor Jake Sullivan said on Thursday.
Sullivan told reporters aboard Air Force One en route to Rome that Biden will meet with the leaders of Germany, France, and Britain “to touch base on where things stand right now with respect to trying to resume negotiations forareturn to the JCPOA,” referring to the Joint Comprehensive Plan of Action, commonly known as the Iran nuclear deal.
The discussion will be an opportunity to coordinate onajoint negotiating position and understand Iran’s progress on its nuclear program, he said.
Iran’s Deputy Foreign Minister and nuclear negotiator Ali Bagheri Kani said on Wednesday that Tehran has agreed to resume negotiations over the nuclear deal before the end of November.
The United States withdrew from the 2015 nuclear deal in May 2018 when Donald Trump was in office, and imposed sanctions on Iran. In response, Iran has gradually stopped implementing parts of its commitments to the deal since May 2019. Enditem